मोदी सत्तामा आए भने?
दक्षिण एसियाबारे जानकार नान्सी पावेलको भारतका लागि अमेरिकी राजदूतबाट राजीनामा अप्रत्याशित होइन। भारतमा लोक सभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता परिवर्तनको संकेतलगत्तै अमेरिकी नीतिमा भारतीय जनता पार्टीका प्रधान मन्त्री उमेदवार नरेन्द्र मोदीप्रतिको नीतिमा बदलावको सन्देश हो।
चिलीको महाभूकम्प र नेपालको पाठ
नेपाली समयानुसार १९ चैत २०७० बिहान करिब ५:३० बजे दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा ८.२ रेक्टर स्केलको भूकम्पले धक्का दियो, जसका कारण करिब २ मीटर अग्लो सुनामीको छाल तटीय क्षेत्रसम्म आइपुग्यो।
सत्य निरुपण : बहस र विश्लेषण
पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय पूरा गर्ने सन्दर्भमा केही सकारात्मक संकेत देखापरेका छन्। उदाहरणका लागि २०७० चैत २० मा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो।
नागरिक–सैनिक सम्बन्धका आयाम
सुरेन्द्र सिंह रावल
नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण विभिन्न हुन सक्छन्। विहङ्गम दृष्टिबाट नागरिक–सैनिकसम्बन्ध भनेको सामान्य नागरिक र सेनाबीचको सम्बन्ध हो।
छयालीस सालको जनआन्दोलनमा होमिएकाको संस्मरणले पत्रपत्रिका भरिएका छन् यतिबेला। मिडियाबाहिरको दुनियाँमा अझ धेरै र अझै महत्वपूर्ण अलिखित, अवाचित संस्मरण छरिएका छन्। परिवर्तनका निम्ति आफूले योगदान गर्न सकेकोमा गौरवको अनुभूति छचल्किएको छ धेरैको संस्मरणमा। कतिका संस्मरण भने गुनासाले भरिएका पनि छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको दायित्व
विगतको द्वन्द्वको पीडालाई अहिले पीडितको आँखा र मनले हेर्नुपर्ने हो। यस विषयलाई पार्टीमा विभाजित गर्नुजस्तो महापाप कुनै पनि हुन सक्दैन। के यस्तो चेतना माओवादीमा छ? शेरबहादुर देउवा कानुनको मान्यतालाई स्वीकार गर्ने गरी चुपचाप हुनुहुन्छ।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।तस्मादपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।।जन्मेपछि निश्चय नै मर्नुपर्छ, मरेपछि जन्म लिनैपर्छ।
महाधिवेशनका वैचारिक एजेेण्डा
नेकपा (एमाले)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन संघारमा छ। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र वैचारिक बहस तीव्र्र बनेकोछ। पार्टीको विचार र सिद्धान्त, समाजको चरित्र, पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तलगायतका महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय बहसको केन्द्रमा छन्। दही मथेर नौनी निकाले जसरी एमालेमा विचारका सवालमा व्यापक छलफल…